ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ အထည်အလိပ်သည် Antistatic အေးဂျင့် မှအရည်အသွေးမြင့် အထည်အလိပ်သည် Antistatic အေးဂျင့် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
CHERNG LONG ENTERPRISE CO., LTD. ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူ အထည်အလိပ်သည် Antistatic အေးဂျင့်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်သည်။ ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသူ့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာစင်ကြယ်သောလျှပ်ကြေးနီကို အသုံးပြု. စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးနှင့် Optimum သည့်သတ္တိကိုသေချာစေရန် annealed ဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုတွင်းနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းများပေးစွမ်းပါသည်။ အခမဲ့ခံစားရ ကျေးဇူးပြု. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - CL-602
ဒီထုတ်ကုန်သည်ကောင်းသော antistatic အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးဗဓေလသစ်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်းအဝါရောင်မဖြစ်စေနိုင်ပါ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/antistatic-agent-for-textile.html
အကောင်းဆုံး အထည်အလိပ်သည် Antistatic အေးဂျင့် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အထည်အလိပ်သည် Antistatic အေးဂျင့် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အထည်အလိပ်သည် Antistatic အေးဂျင့် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan